China Ceramic breeki mpe mpe akwa, na-adịgide adịgide na enweghị ụlọ ọrụ mkpọtụ na ndị na-ebubata | SANTA
diski breeki nkịtị
Geomet breeki diski
Disiki breeki agbasara agba
Drum breeki gwongworo
Ihe mgbochi breeki nke ọkara ọla
Pads breeki dị ala
Ihe mgbochi seramiiki
Akpụkpọ ụkwụ breeki
DISC breke anyị
Oghere breeki anyị
diski breeki, nwere njikwa mma siri ike
Ụgbọala breeki maka ụgbọ ala azụmahịa
Geomet mkpuchi breeki diski, enyi na gburugburu ebe obibi
Eserese & Gbanyụọ & Sịkị breeki nwere oghere
Ịgba breeki maka ụgbọ ala ndị njem
Ịgba breeki nwere ọgwụgwọ nguzozi
Mpempe breeki nke ọkara ọla, arụmọrụ dị oke elu
Mpempe breeki ọla dị ala, arụrụ ọrụ breeki dị mma
Ihe mgbochi seramiiki, na-adịte aka na enweghị mkpọtụ
Akpụkpọ ụkwụ breeki na-enweghị mkpọtụ, enweghị ịma jijiji
A na-esi na seramiiki eme breeki ihe nkedo yiri ụdị seramiiki a na-eji arịa ite na efere, mana ha pere mpe ma dịkwa ogologo karịa. Igwe breeki seramiiki nwekwara eriri ọla kọpa mara mma nke etinyere n'ime ha, iji nyere aka mee ka esemokwu ha na ọkụ ọkụ.
Ebe ọ bụ na e mepụtara ha n'etiti afọ 1980, paịlị seramiiki na-abawanye na ewu ewu n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya:
● Ọkwa mkpọtụ: Ihe mgbochi seramiiki na-adị jụụ nke ukwuu, na-emepụta obere ụda na-enweghị mgbakwunye mgbe a na-etinye brek.
● Yiri & Mwepu Anya: E jiri ya tụnyere paịlị breeki organic, paịlị seramiiki na-emepụta obere uzuzu na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ ka oge na-aga ka ike na-ada.
● Okpomọkụ & Ọnọdụ ịkwọ ụgbọala: Tụnyere paịlị breeki organic, breeki seramiiki nwere ike b
Ngwaahịa: Ihe mgbochi seramiiki maka ụdị ụgbọ ala niile
Aha ndị ọzọ Ihe mgbochi seramiiki
Ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao
Ụzọ mbukota Agba igbe nkwakọ ngwaahịa na ndị ahịa ika
Ihe onwunwe Ọkara ọla
Oge Mbuga ozi 60days maka 1 ruo 2 akpa
Ibu 20ton maka akpa 20 ụkwụ ọ bụla
Akwụkwọ ikike 1 afọ
Asambodo Ts16949&Emark R90
A ga-enyocha ibe ọ bụla tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ
Nchịkọta breeki Santa
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe gasịrị, Santa breeki nwere ndị ahịa gburugburu ụwa. Iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ, anyị hibere onye nnọchi anya ahịa na Germany, Dubai, Mexico, na South America. Iji nwee nhazi ụtụ isi na-agbanwe agbanwe, Santa bake nwekwara ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na USA na Hongkong.
N'ịdabere na isi mmepụta nke China na ebe RD, Santa breeki na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị mma na ọrụ ntụkwasị obi.
Ahụmahụ mmepụta akụkụ breeki afọ 15
Ndị ahịa n'ụwa niile, zuru oke. Ụdị zuru oke nke ihe karịrị akwụkwọ ntụaka 2500
Na-elekwasị anya na breeki mpe mpe akwa, dabere n'ịdị mma
Ịmara maka sistemu breeki, uru mmepe breeki, mmepe ngwa ngwa na ntụnyere ọhụrụ.
Ike njikwa ọnụ ahịa dị oke mma, dabere na nka na aha anyị
Ogologo oge na obere oge gbakwunyere zuru oke mgbe ọrụ ire ere
Nkwado katalọgụ siri ike
Ndị ọkachamara na ndị na-ere ahịa raara onwe ha nye maka nkwurịta okwu dị mma
Dị njikere ịnabata ihe ndị ahịa chọrọ
Ịga n'ihu na-emeziwanye na ịhazi usoro anyị
Kedu ihe dị iche n'etiti paịlị metal metal na seramiiki?
Ọdịiche dị n'etiti seramiiki na nke ọkara ọla dị mfe - ihe niile na-agbadata na ihe eji emepụta breeki ọ bụla.
Mgbe ị na-ahọrọ ihe mkpuchi seramiiki ma ọ bụ ọkara ọla maka ụgbọ ala, enwere ụfọdụ ngwa nke seramiiki na ọkara ọla abụọ na-enye uru dị iche iche.
Maka ụgbọ ala arụmọrụ, ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ mgbe a na-adọkpụ, ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ahọrọ breeki ọkara ọla, ebe ha na-enye breeki ka mma karịa oke okpomọkụ na ọnọdụ. A na-eme ha nke ihe ndị na-eduzi okpomọkụ nke ọma, si otú a na-eme ka ha nwee ike iguzogide okpomọkụ dị elu n'elu breeki, ma na-enyere usoro ahụ aka oyi n'otu oge. Mpempe breeki nke ọkara ọla nwere ike ịdị mkpọtụ karịa paịlị seramiiki na ọnụ ahịa ha na-adabakarị n'etiti nke breeki organic na seramiiki.
Ihe mgbochi seramiiki, ebe ọ na-adị jụụ, na-enwekwa ike ijikwa oke okpomọkụ na mgbake ngwa ngwa, na-ebute obere mmebi na rotors. Ka ha na-eyi, breeki seramiiki na-emepụta uzuzu dị mma karịa paịkị breeki nwere ọkara, na-ahapụ obere mkpọmkpọ ebe na wiil ụgbọ ala. Igwe breeki seramiiki na-adịte aka karịa paịlị breeki nke ọkara, na site na ndụ ha, na-enye njikwa mkpọtụ ka mma yana obere iyi na-adọka na rotors, na-enweghị ịchụ arụ ọrụ breeki. Mgbe ị na-ekpebi seramiiki na paịlị igwe anaghị agba nchara, buru n'uche na ọ bụghị ụgbọ ala na ụdị ọ bụla dabara na paịlị seramiiki, yabụ na-adụ ọdụ nyocha.
Ịghọta ka pad breeki si arụ ọrụ yana otu ihe dị iche iche nke breeki siri dabara maka ngwa dị iche iche ga-enyere gị aka ịme nhọrọ breeki ziri ezi iji dabara ụgbọ pụrụ iche nke onye ahịa gị yana mkpa ịkwọ ụgbọala.
Nke gara aga: Akpụkpọ ụkwụ breeki na-enweghị mkpọtụ, enweghị ịma jijiji
Osote: Geomet mkpuchi breeki diski, enyi na gburugburu ebe obibi
ụgbọ ala seramiiki breeki
breeki mpe mpe akwa na akpụkpọ ụkwụ
Ọnụ ego breeki
breeki mpe mpe akwa akpụkpọ ụkwụ breeki
breeki pads diski
China breeki pads ụlọ ọrụ
diski breeki setịpụrụ
mpe mpe akwa breeki n'ihu
paịlị breeki n'ogbe
& Bụrụ ọhụrụ
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị, biko hapụ anyị ozi na anyị ga-abanye n'ime awa 24
adreesị:Tushan Industrial Park, Laizhou City, Shandong Province, China
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị mpe mpe akwa breeki akpaaka, breeki drum volvo, Pads breeki na-arụ ọrụ, Ụgbọ ala breeki, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, diski breeki,